M/weyne Shariif oo dhalleeceeyey weerarkii hutel Muna, tafaasiilna ka bixiyey khasaaraha dhimasho iyo dhaawac. – Radio Daljir
M/weyne Shariif oo dhalleeceeyey weerarkii hutel Muna, tafaasiilna ka bixiyey khasaaraha dhimasho iyo dhaawac.
Agoosto 24, 2010 12:00 b 0
Muqdisho, Aug 24 – M/weyne Shariif oo la hadlay saxaafada, kadib weerarkii hutel Muna ayaa dhalleeceeyey dilka dadkii lagu laayey hutel Muna. 33 qof oo u badan dad rayad ah ayna ka mid yihiin 6 mudane oo ka tirsanaa baarlamaanka federaalka ah ee Somaliya oo ku geeriyooday hutel Muna.
Dawlada Puntland oo cambaaraysay weerarkii & qaraxyadii hutel Muna, tacsina u dirtay ehelada & shacabka Muqdisho.
Maamulaha bangiga dhexe ee Galkacyo, C/llahi Cali Barre oo beeniyey in lacago bangiga yaaley si qaldan loo maamulay, ama la lunsaday.